1 Madzimambo 21:1-29
21 Zvino pashure pezvinhu izvi, kwaiva nomunda wemizambiringa waiva kuJezreeri, waNabhoti muJezreeri,+ pedyo nomuzinda waAhabhi mambo weSamariya. 2 Naizvozvo Ahabhi akataura naNabhoti, achiti: “Ndipe+ munda wako wemizambiringa,+ kuti uve munda+ wangu wemiriwo,+ nokuti uri pedyo neimba yangu; uye ini ndikupe munda wemizambiringa uri nani panzvimbo pawo. Kana zvakanaka kwauri,+ ndichakupa mari kuti ndiutenge.” 3 Asi Nabhoti akati kuna Ahabhi: “Handingambofungi+ zvakadaro, mukuona kwaJehovha,+ kuti ndikupei nhaka yemadzitateguru angu.”+ 4 Naizvozvo Ahabhi akapinda mumba make, akafundumwara uye akasuruvara nokuda kwezvaakanga audzwa naNabhoti muJezreeri, paakati: “Handizokupii nhaka yemadzitateguru angu.” Akabva arara pamubhedha wake, akaramba akafuratidza+ chiso chake, uye haana kudya zvokudya. 5 Jezebheri+ mudzimai wake akazopinda maaiva akati kwaari: “Nei makasuruvara+ uye musiri kudya zvokudya?” 6 Iye akati kwaari: “Nokuti ndakataura naNabhoti muJezreeri, ndikati kwaari, ‘Ndipe munda wako wemizambiringa ndiutenge nemari. Kana kuti, kana uchida, ini ndikupe mumwe munda wemizambiringa panzvimbo pawo.’ Asi akati, ‘Handisi kuzokupai munda wangu wemizambiringa.’”+ 7 Mudzimai wake Jezebheri akabva ati kwaari: “Ndimi zvino muri kutonga Israeri here?+ Simukai, idyai zvokudya uye mwoyo wenyu ngaufare. Ini pachangu ndichakupai munda wemizambiringa waNabhoti muJezreeri.”+ 8 Naizvozvo akanyora tsamba+ achishandisa zita raAhabhi, akadzisimbisa nechisimbiso+ chake, akatumira tsamba dzacho kuvarume vakuru+ nevanokudzwa vaiva muguta rake, vaigara naNabhoti. 9 Asi akanyora mutsamba dzacho, achiti:+ “Zivisai kuti pave nokutsanya, uye itai kuti Nabhoti agare panzvimbo yokutanga pane vamwe vanhu. 10 Itai kuti varume vaviri,+ vanhu pasina,+ vagare pamberi pake, uye ngavamupomere,+ vachiti, ‘Wakatuka Mwari namambo!’+ Budai naye mumuteme nematombo kuti afe.”+ 11 Naizvozvo varume veguta racho, varume vakuru nevanokudzwa vaigara muguta rake, vakaita sezvavakanga vatumirwa naJezebheri, sezvakanga zvakanyorwa mutsamba dzaakanga avatumira.+ 12 Vakazivisa kuti pave nokutsanya,+ vakaita kuti Nabhoti agare panzvimbo yokutanga pane vamwe vanhu. 13 Varume vaviri, vanhu pasina, vakabva vapinda vakagara pamberi pake; uye varume vacho pasina vakatanga kumupomera, iye Nabhoti, pamberi pevanhu, vachiti: “Nabhoti akatuka Mwari namambo!”+ Pashure paizvozvo vakaenda naye kunze kweguta, vakamutema nematombo, zvokuti akafa.+ 14 Zvino vakatumira shoko kuna Jezebheri, vachiti: “Nabhoti atemwa nematombo akafa.”+ 15 Zvino Jezebheri paakangonzwa kuti Nabhoti akanga atemwa nematombo akafa, Jezebheri akabva ati kuna Ahabhi: “Simukai mutore munda wemizambiringa waNabhoti muJezreeri uve wenyu,+ waakaramba kukupai kuti mutenge nemari; nokuti Nabhoti haasisiri mupenyu, asi afa.” 16 Ahabhi paakangonzwa kuti Nabhoti akanga afa, Ahabhi akabva asimuka kuti aende kumunda wemizambiringa waNabhoti muJezreeri, kuti anoutora, kuti uve wake.+ 17 Zvino shoko+ raJehovha rakasvika kuna Eriya+ muTishbhi, richiti: 18 “Simuka uende, unosangana naAhabhi mambo waIsraeri, ari kuSamariya.+ Hoyo ari mumunda wemizambiringa waNabhoti, kwaaenda kuti anoutora kuti uve wake. 19 Iti kwaari, ‘Zvanzi naJehovha: “Waponda+ ukatorawo kuti uve wako here?”’+ Itiwo kwaari, ‘Zvanzi naJehovha: “Imbwa dzichananzva ropa rakowo+ panzvimbo+ pakananzvirwa ropa raNabhoti nembwa.”’” 20 Ahabhi akati kuna Eriya: “Wandiwana here, haiwa iwe muvengi wangu?”+ iye akati: “Ndakuwana. ‘Nokuti wazvitengesa kuti uite zvakaipa pamberi paJehovha,+ 21 tarira ndiri kukuunzira dambudziko;+ ndichatevera ndichikutsvaira+ ndoparadza munhurume+ wose waAhabhi, asina mubatsiri neasina zvaanobatsira pakati paIsraeri. 22 Ndichaita kuti imba yako ive seimba yaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati uye seimba yaBhaasha+ mwanakomana waAhija, nokuda kwezvinogumbura zvawakagumbura nazvo, ukabva watadzisa Israeri.’+ 23 Jehovha atiwo pamusoro paJezebheri, ‘Imbwa dzichadyira Jezebheri muchikamu chomunda chokuJezreeri.+ 24 Ani naani waAhabhi anofira muguta, achadyiwa nembwa; uye ani naani anofira kusango, achadyiwa neshiri dzokumatenga.+ 25 Chokwadi hapana mumwe munhu akava saAhabhi,+ akazvitengesa kuti aite zvakaipa pamberi paJehovha, achikurudzirwa+ naJezebheri+ mudzimai wake. 26 Akaita zvinosemesa kwazvo nokutevera zvidhori zvaisemesa sendove,+ kufanana nezvose zvakanga zvaitwa nevaAmori, vakadzingwa naJehovha pamberi pevanakomana vaIsraeri.’”+ 27 Ahabhi paakangonzwa mashoko aya, akabvarura nguo dzake, akapfeka masaga+ pamuviri wake; akatsanya, akaramba akarara pasi akapfeka masaga, achifamba akasuruvara+ kwazvo. 28 Shoko raJehovha rakasvika kuna Eriya muTishbhi, richiti: 29 “Waona here kuzvininipisa kwaita Ahabhi nokuda kwangu?+ Nokuti azvininipisa nokuda kwangu, handizounzi dambudziko racho mumazuva ake.+ Ndichaunzira imba yake dambudziko racho mumazuva omwanakomana wake.”+